कम उमेरमै मनग्य पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? यी ३ टिप्स् अवश्यक अपनाउनुस्
काठमाण्डौ । कोरोनाकालमा देशको अर्थव्यवस्था र मानिसको आर्थिक हालत दुवै बिग्रेको छ। यस्तोमा कसैसँग लगानीको कुरा गर्ने हो भने उसले अहिले पैसाको निकै समस्या रहेको जबाफ दिनेछ। यद्यपि अहिले समय–परिस्थितिअनुसार तपाइँ कम उमेरमै मनग्य आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाइँले जति छिटो लगानी गर्नुहुन्छ, त्यति नै मनग्य प्रतिफल प्राप्त...
काठमाण्डौ । बेल्जियममा एउटा रेसर परेवा १९ लाख डलर (२२ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबर) बिक्री भएको छ। दुई वर्षको यो पोथी परेवाको नाम न्यु किम हो। पहिला यो परेवालाई २३७ डलर (२८ हजार २०० रुपैयाँबराबर) मा लिलामीमा राखिएको थियो। तर चीनका एक व्यक्तिले यसलाई १९ लाख डलरमा किनेको हो। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यति ठूलो धनराशिमा आफूले पालेको...
माइतीको ठाउँमा गिफ्टप्याक आयो, अनि बन्यो मार्मिक माहौल !
काठमाण्डौ । सबै तयारी पूरा गरी पूज्नलाई ठीक्क परेर बसेकी चेली एकैछिनअघि मात्र माइती आउन नसक्ने खबर थाहा पाउँदा कत्ति दुःख लाग्दो हो ? यस्तो अवस्था यो पटकको तिहारमा चेलीको टीका थाप्न जाने तयारी गरेका वा माइतीलाई पूज्ने सबै तयारी पूरा गरेका जुनसुकै नेपाली चेलीलाई पर्नसक्छ । किनभने यो कोरोनाकाल हो । कोरोनाकै कारण धेरै चेली-माइतीबीच मिलन...
-प्रकाश बञ्जारा म अहिले सयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको दुवईमा छु । म रोजगारीका लागि खाडी आएको नेपालीको प्रतिनिधि एक पात्र हुँ । जो घरको वाध्यतालाई धान्नकै लागि देशमा लकडाउन भइरहँदा र राजधानीमा निषेधआज्ञा जारी भइरहँदा पनि हरियो पासपोर्ट देखाएर बालबालिकाको पेट सम्झिँदै देश छोडेर हिँडेको नागरिक हुँ । जतिबेला विदेशमा रहेका अन्य नेपाली...
‘सफलताका लागि चिन्ता होइन चिन्तन गरौँ’
- आर.आर. हरिकृष्ण जोशी, बैंकर हो ! मानिसको स्वभावअनुसार नै चाहना, सपना र इच्छा अनगिन्ती हुन्छन्। ती चाहना, सपना अनि इच्छा पूरा गर्न खोज्दा–खोज्दै जीवन बितिरहेको छ। हामीलाई सधैँ अगाडि बढ्न मन लाग्छ, चाहे त्यो जागिरे जीवनमा होस् वा विद्यार्थी जीवनमा अनि खेलकुदमा होस् या व्यापारव्यवसायमा। हरेक क्षेत्रमा हरेक मानिसहरुले अगाडि बढ्ने चाहनाका...
घर बसीबसी युट्युबबाटै बन्नुहोस् मालामाल, अपनाउनुस् यी तरिका
काठमाण्डौ । युट्युब मनोरञ्जनको साधनमात्र होइन कमाइको माध्यम पनि हो। तपाइँ युट्युबमा च्यानल बनाएर पैसा कमाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ युट्युबर बनेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाइँले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नुपर्छ। युट्युबबाट कमाइ गर्नका लागि निम्न कुरामा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ :– १. युट्युबमा यसरी बनाउने भिडियो युट्युब...
जागिरसँगैसँगै अतिरिक्त आम्दानी बढाउन चाहनुहुन्छ? यी ३ तरिका अपनाउनुस्
काठमाण्डौ । प्रायः जागिरे मानिसहरु आफ्नो कमाइ निकै कम रहेको गुनासो गर्छन्। उनीहरु जागिरसँगसँगै अतिरिक्त आम्दानी गर्न पनि चाहन्छन्। तर अधिकांश कम्पनीहरुले यस्तो एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छन् कि आफ्ना कर्मचारीहरु अन्य कम्पनी वा संस्थामा पार्ट टाइम काम गर्न पाउने छैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि तपाइँ जागिरसँगसँगै अतिरिक्त कमाइ गर्न �...
कोरोनाकालमा निजी सवारीलाई एम्बूलेन्स बनाउने मनकारी पात्र
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी बनेको कोभिड–१९ को संक्रमण नेपालमा पनि बढ्ने क्रम जारी नै छ । कोरोनाको डरका कारण गम्भीर अवस्थाका बिरामीले भनेको बेलामा अस्पताल जान पाएका छैनन् । एम्बूलेन्सहरुले कोरोनाको त्रासका कारण बिरामीहरुलाई बोक्ने काम नगर्दा कतिपयको अकालमै ज्यान गइरहेको छ । यही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो समाजमा कतिपय पात्र यस्ता छन्,...
यी हुन् उमेरअनुसार बचतका प्रतिफल, मासिक रु. ५ हजार बचतले बन्नेछ रु. २.६ करोडको धनराशि
काठमाण्डौ । पक्कै जोहोको सपना भविष्य सुनौलो होस् भन्ने नै हुन्छ। आम मानिसले भविष्यमा जीवनयापन आरामदायी बनाउन निकै मेहनत गरिरहेका हुन्छन्। तर आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा बचत गर्ने हो भने यो सपना पक्कै पनि साकार हुनेछ। आफ्नो आम्दानीमध्ये सानो अंशबाट बचत गर्दा हुने प्रतिफल उमेरअनुसार फरक हुन्छ। त्यसैले जति छिटो तपाइँले आफ्नो...
दैनिक रु. ५०० बचत गरेर यसरी बन्न सकिन्छ करोडपति
काठमाण्डौ । यदि तपाईको उमेर २०, ३० वा बढीमा ४० वर्षसम्म छ र ६० देखि ६५ वर्षको उमेरमा रिटायर्ड हुन चाहनुहुन्छ भने अहिलेको समयले हिसाब गर्दा तपाईसँग १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्म फण्ड भयो भने पनि कम हुनसक्छ । यदि रिटायर्ड लाइफमा योभन्दा बढी बचत गर्नुछ भने तपाईले सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ । यो आर्टिकलमा तपाईले दैनिक ५०० रुपैयाँ जम्म गरेर रिटायर्ड...
अब सपिङका लागि कार्ड नचाहिने, हात घुमाएरै पेमेन्ट गर्न सकिने
काठमाण्डौ । विश्वचर्चित इकमर्स कम्पनी अमेजनले नयाँ बायोमेट्रिक पेमेन्ट सिस्टम लञ्च गरी विश्वलाई चकित बनाइदिएको छ । कम्पनीले नयाँ बायोमेट्रिक पेमेन्ट सिस्टम ‘अमेजन वान’ लञ्च गरेको हो । यो बायोमेट्रिक पेमेन्ट सिस्टमको मुख्य विशेषता यो हो कि तपाईले केवल आफ्नो हात देखाएर जस्तोसुकै र जतिसुकै पेमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यसबाट निकै...
एउटा पुरानो टीभीले पूरै गाउँको इन्टरनेट सेवा १८ महिना अवरुद्ध
काठमाण्डौ । एउटा गाउँमा प्रत्येक दिन बिहान ७ बजे ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट किन अवरुद्ध हुन्छ भन्ने रहस्य एउटा पुरानो टेलिभिजन सेट फेला परेपछि सुल्झिएको छ। सेन्ट्रल वेल्सस्थित आबेर्होसान गाउँमा बस्ने एक व्यक्ति उनको पुरानो टीभीले पूरै गाउँको इन्टरनेट अवरोध गर्ने एक किसिमको संकेत उत्सर्जन गर्छ भन्नेबारे अनभिज्ञ थिए। पूरै तार फेर्दा पनि...
आम्दानी र बचत सजिलै बढाउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी १० टिप्स्
काठमाण्डौ । हामी सबै सुनौलो भविष्यको सपना बुन्छौँ अनि पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास र मेहनत पनि गर्छौं। तर जीवनमा अन्य धेरै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । आय भने सीमित हुन्छ। सुनौलो भविष्यको सपना पूरा हुने वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो आम्दानीअनुसार वित्तीय योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ। आज हामी यहाँ...
कुनै पनि प्राणीको मृत्युको पुर्वानुमान गर्न सकिने वैज्ञानिकहरुको दाबी
रगतमा रहेको भिटामिन ‘डी’ को तहका आधारमा स्वास्थ्यको भविष्यवाणी गर्न सकिने एक अध्ययनले निश्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनकर्ताहरुले भिटामिन ‘डी’ को आधारमा कुनै पनि प्राणीको मृत्युको पुर्वानुमान गर्न सकिने समेत दावी गरेका छन् । स्वास्थ्यमा आउने भावी चुनौतीलाई पनि भिटामिन ‘डी’को अध्ययनबाट थाहा पाउन सकिने अध्ययनकर्ताहरुको...
काठमाण्डौ । तपाइँले अहिलेसम्म गाईभैंसी, बाख्राको दूध पिउनु भएको होला वा उटँको दूध पिएको बारेमा पनि सुन्नुभएकै होला । तर भारतमा यतिबेला गधाको दूधको बारेमा धेरै नै चर्चा चलिरहेको छ । चर्चा पनि किन नचलोस्, प्रतिलिटर गधाको दूधको मूल्य ७ हजार भारतीय रुपैयाँ भएपछि । भारतीय मिडियाहरुका अनुसार अब चाँडै नै भारतमा गधाको दूधको डेरी सञ्चालनमा आउने...